67% dadka Kenya waxaa ay doonayaan in Ciidankooda laga saaro Soomaaliya — Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
67% dadka Kenya waxaa ay doonayaan in Ciidankooda laga saaro Soomaaliya
By MAREEG	 On Feb 19, 2017
NAIROBI, Kenya Mareeg. Shacabka Dalka Kenya, ayaa Dowladda Uhuru Kenyatta, ku cadaadinaya in Ciidamada ka jooga Soomaaliya, dib loogu celiyo Kenya,sidoo kalena ay dowladda shaaciso khasaaraha rasmiga ah ee Ciidanka Kenya ku gaaray gudaha Soomaaliya.
Ra’yi ururin la sameeyay oo ay soo bandhigtay idacadda Radio Africa, oo xaruntiisu ay tahay magaalada Nairobi Kenya ayaa lagu sheegay in Kenyanka ay dalbanayaan in dowladda Kenya ay Ciidanka KDF ee ka howlgala Soomaaliya ay ka saarto .
Shacabka Kenya ayaa waxaa ay ra”yi aruurintan ay ku dalbanayaan in Dowladda ay si rasmi ah u shaaciso khsaaraha rasmiga ah ciidanka Kenya ka soo gaaray weerarradii Ceel Cadde iyo Kulbiyo ee Gedo iyo Jubbada hoose ee Soomaaliya.
Weerarka Ceel-Cadde ayaa dhacay 15 kii bishii koowaad ee sanadkii 2016 kii.
Al-shabaab ayaa sheegatay in ciidanka Kenya ay ka dishay tiradiisa ay kor u dhaaftay 100 qof, hase ahaatee wali Kenya ma aysan shaacin tirada halkaasi looga dilay
MAREEG	 2 years ago
Warbaahinta Kenya ayaa waxaa ay qoreen 180-200 oo Askari in looga dilay weerarkii Ceel Cadde ee gobalka Gedo.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in weerarkii Kuulbiyow looga dilay 9 Askari 15 kalena looga dhaawacay, hase ahaatee Al-shabaab iyo Warbaahinta caalamiga ah ayaa khasaaraha weerarka Kulbiyoow ku sheegay 57-68 Askari..
80% Dadkii la weydiiyay ra’i ururintan waxaa ay sheegeen in khasaaraha ay Dowladda ka sheegto weerarrada Al-shabaab aysan sax ahayn oo aysan aamineyn.
Qaraxii 1aad ee weerarkii Ceel Cadde ayaa ayey Kenya ku sheegtay in 3 laab uu ka culeys badnaa qaraxii lagu weeraray Safaaradda Mareykanka ee Nairobi 1998ddii.
Somalia: Car explosion in busy market kills scores